डीएसपी पाठकको भब्य विदाई, दोलखाको एक बर्षे अपराध अनुसन्धानलाई फर्केर हेर्दा… – Mission Khabar
डीएसपी पाठकको भब्य विदाई, दोलखाको एक बर्षे अपराध अनुसन्धानलाई फर्केर हेर्दा…
मिसन खबर २७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०८:३६
सुरज बस्नेत, दोलखा । एक बर्षे कार्यकाल सफल रुपमा पुरा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख (प्रहरी नायव उपरीक्षक) बासुदेव पाठकलाई जिल्लामै पहिलो रेकर्ड बन्नेगरी भब्य विदाई गरिएको छ । विभिन्न ३० वटा संघ संस्थाबाट कामको प्रशंसा गर्दै सामूहिक विदाई गरेपछि हामीले पाठकले शान्ति सुरक्षामा के गरे भन्ने समिक्षा गर्ने प्रयास गरेका छौँ । के उनले दोलखालाई शान्तिपुर्ण बनाएर साच्चै अमनचयन स्थापना गरेका थिए त ?
यस्तो छ, जिल्लाको अपराध अनुसन्धानको प्रगती
आर्थिक बर्ष ०७३\_०७४ मा १ सय ८९ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा आत्महत्याका ३९, सवारी ज्यानका ७ र जवरजस्ती करणीका १० वटा थिए । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २ सय ५१ वटा मुद्धा दर्ता हुँदा आत्महत्याका ६२ सवारी ज्यानका १४ र जवरजस्ती करणीका १२ वटा मुद्धा दर्ता भए । यस्तै, पाठकले जिल्ला प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको आर्थिक बर्ष २०७५\_०७६ मा १ सय ५३ वटा मात्रै मुद्धा दर्ता भए । यो समयमा ३५ वटा आत्महत्याका, ५ वटा सवारी ज्यानका र जवरजस्ती करणीका ८ वटा मात्रै मुद्धा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ३७ वटा चोरीका मुद्धा दर्ता भएकोमा यो बर्ष १५ वटा मात्रै दर्ता भए र तीन वटा बिरुद्ध मात्रै मुद्धा चल्यो । यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ, वितेको एक बर्षमा अपराध नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।
दोलखा जिल्लाको इतिहासमै पहिलो पटक ३० वटा संघ संस्थाहरुले प्रहरी प्रमुखको भव्य विदाई गर्नुपनि यहि सुधारको सम्मानका रुपमा हेरिएको छ । दोलखाबाट सम्पत्ति सुद्धिकरण आयोगमा सरुवा हुनुले पनि प्रहरी नायव उपरीक्षक पाठकले अपराध नियन्त्रणमा गरेको काममा सम्मान मिलेको छ । दोलखामा पुग्नासाथ डिएसपी पाठकले आक्रामक सुरुवात गरेका थिए । गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियताले जिल्लामा बढावा पाएको गुण्डागर्दीमा निक्कै धेरै कमी आयो । सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिकसँगको समन्वयमा सुरु गरिएको सचेतनाले दुर्घटना नियन्त्रण प्रयास पनि सार्थक भयो । जिल्लामा बन्यजन्तुको हाडखोर, छाला, लागू औषध लगायतको प्रतिबन्धित सामानको तस्करी नियन्त्रणमा समेत पाठकले एक्सान लिएको कतिपय जानकारहरु बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ, ब्लड क्यान्सर जस्तो जटिल रोगसँग लामो समय संघर्ष गरेर अन्ततः रोगलाई नै जित्दै नयाँ जीवन पाएका डीएपी पाठकको जीवन धेरैका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ । पाठकले जिल्लामा आफूले रोगसँग फाइट ब्याक गरेको स्मरण गर्दै चलाएको फाइट ब्याक अभियानले घरेलु हिंसा, बाल यौन हिंसा लगायतका हिंसा रोक्न सहयोग पुर्याएको धेरैको बुझाई छ । उनी सधै भन्ने गर्छन रक्तकोषीकाको संक्रमण निर्मूल गरेजसरी अब समाजमा रहेका क्यान्सर कोषिकाहरु निर्मुल पार्नुछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, दोलखा उद्योग बाणिज्य संघ, नेपाल वार एसोशियसन, गैर सरकारी संस्था महासंघ, दोलखा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला फुटबल संघ, जिल्ला ब्याडमिन्टन संघ, असल शासन समन्वय समिति, बागेश्वरी असल शासन क्लब, जिल्लामा रहेको पाँच वटा रेडियो, दैनिक पत्रिका र अनलाईनहरुले संयुक्त रुपमा विदाई गरेर उनको योगदानको सम्मानपनि गरेका छन् ।
जिल्लाबाट भब्य सम्मान सहित बिदाई भएर सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग पुगेका प्रहरी नायव उपरीक्षक पाठकले आफ्नो जिम्मेवारी र दायीत्वलाई कसरी पुरा गर्छन यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
एसपीले नेतृत्व गर्न लागेको दोलखा जिल्लामा अबको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको अवस्था कस्तो रहन्छ ? जिल्लाबासीको चिन्ता यसैमा छ । उजूरीको संख्या घटेर दोलखामा सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभुत गराउन आगामी नेतृत्व सक्षम बन्छ वा अराजकता र अशान्तिले बढावा पाउँछ, केही समयको जिम्मेवारी र कामपछि वास्तविकता बाहिर आउने छ । आशा गरौँ दोलखा सहितका सबै जिल्लाको प्रहरी नेतृत्वले संगठन प्रतिको विश्वास बढाउन सकुन र नागरिकको मन जित्न सकुन् ।